ကာလအတွင်း, ခုန်တက်သွားသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု၏ကံကြမ္မာသည်ပြိုကျသွားသည်။ အကယ်၍ အရက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်အမေရိကန်စာတိုက်လုပ်ငန်းကိုကယ်တင်နိုင်လျှင်ကော။
IWSR Drinks Market Analysis မှနို ၀ င်ဘာ ၂၀၂၀ အစီရင်ခံစာမှာ အွန်လိုင်းအရက်သေစာဝယ်ယူမှုဟာဒီနှစ်မှာတိုးလာကြောင်း၊
စားသုံးသူတွေရဲ့ထက်ဝက်နီးပါး (၄၄%) ဟာအရက်သေစာ e-commerce သို့အသစ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့် IWSR မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်၏အရက်ယမကာ e-commerce စျေးကွက်သည် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်မည်ဟုခန့်မှန်းထားပြီးစျေးကွက် ၁၀ ခုတွင်ဒေါ်လာ ၂၄ ဘီလီယံကျော်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နွေ ဦး ရာသီကအိမ်တွင်းပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာအမိန့်များသည်တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုဥပဒေပြtw္ဌာန်းချက်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြည်နယ်များအနေဖြင့်ပြည်နယ်နှင့်အရက်အပြင်သို့အရက်မပို့ခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည့်အရက်ထိန်းချုပ်မှုစည်းမျဉ်းများကိုဖြေလျှော့ပေးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီကစက်ရုံများသည်အမှုကိစ္စများကိုပြည်နယ်မှတင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကသို့မဟုတ်အဏုဇီဝစက်ရုံများသည်စားသုံးသူများမှအမှာစာများကိုကောက်ယူမည့်ပြည်နယ်အရက်များသိုလှောင်ရုံသို့သာတင်ပို့နိုင်သည်။ သို့သော်ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီကအရက်တင်ပို့ရန်ခက်ခဲသော်လည်းတစ်နှစ်အကြာတွင်ပြည်နယ်အများစုသည်အရက်ကိုသောက်သုံးခြင်းလှိုင်းကိုကူညီရန်ကန့်သတ်ချက်များကိုဖြေလျှော့ပေးခဲ့သည်။
ပြည်နယ်များကအရက်များကိုစာဖြင့်ပို့ခြင်းဖြင့်ခွင့်ပြုသည့်နေရာမှာတောင်မှ FedEx သို့မဟုတ် UPS ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂလိကသယ်ဆောင်သူများသာပြောခဲ့သည် , အ packages များကိုင်တွယ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ယူအက်စ်စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုသည်အရက်များပေးပို့ခြင်းကိုမကိုင်တွယ်ပါ
ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ဘတ်ဂျက်ရုံး၏အဆိုအရစာတိုက်ကိုအရက်တင်ပို့ခြင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ထပ်တိုးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် USPS ကိုပုဂ္ဂလိကသယ်ဆောင်သူများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောရွေးချယ်စရာများကိုပေးလိမ့်မည်။
အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းကတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၅၀ လောက်ယူဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။ စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု
စိတ်ကူးကအသစ်မဟုတ်ပါ။ ထပ်မံ၍ ကိုယ်စားလှယ် Jackie Speier (D-California) သည်အရက်များကိုစာဖြင့်ပို့ခြင်းအားတားမြစ်ရန်အတွက်ဥပဒေကြမ်းများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု၏ဆိုးရွားသည့်ဘဏ္financialာရေးအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်သော USPS အားဤတင်ပို့မှုအမျိုးအစားများမှသူတို့ကိုတားမြစ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်” ဟုကိုယ်စားလှယ်ကပြောကြားခဲ့သည်။မေလ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မေလတွင်“ ကွန်ဂရက်သည်အဖျော်ယမကာထုတ်လုပ်သူများ၊ စားသုံးသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်နေရသောစာတိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အကျိုးအတွက်ဤတားမြစ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ရမည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာအိမ်မှာကပ်ရောဂါအရက်သောက်သုံးမှုမှာမှတ်တမ်းတင်မခံရမီကြာမြင့်စွာကတည်းကတိုက်ရိုက်စားသုံးသူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးကွက်ဟာဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကစားကွင်းနှင့်eသည် USPS အတွက် ၀ င်ငွေအရင်းအမြစ်အသစ်ကိုတည်ထောင်သည်” ဟုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါဥပဒေကြမ်းကိုအမျိုးသားကျေးလက်အက္ခရာသယ်ဆောင်သူများအသင်း၊ အမျိုးသားစာတိုက်ကိုင်တွယ်သူများသမဂ္ဂ၊ စာလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမျိုးသားအသင်း၊ အမေရိကန်စာတိုက်ကြီးကြပ်သူများနှင့်အမေရိကန်မန်နေဂျာများ၊ စာတိုက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများအသင်း၊ ဝိုင်အင်မီကာ၊ ဝိုင်အင်စတီကျု၊ Craft Spirits Association၊ အမေရိကန် Cider ပြုလုပ်သူများအသင်း၊ Kentucky Distillers Association နှင့် Distillir Spirits ကောင်စီ။
အရက်ယမကာများတင်ပို့ခြင်းအားခွင့်ပြုခြင်းကဒီဆေးအတွက်အဓိကကျသော ၀ င်ငွေကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်စာတိုက်သို့
Congress.gov အရ HR 2517 ကိုမေလ ၁၉၉၉ မှာစတင်ခဲ့ပြီးရာဇ ၀ တ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လုံခြုံရေးအတွင်းဆပ်ကော်မတီကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ အရေးယူကတည်းကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သောဝန်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခု၏စိတ်ကူးသည်အမေရိကန်စာပို့အလုပ်သမားအလုပ်သမားသမဂ္ဂ၏ထောက်ခံမှုဖြစ်သည်။ USPS အနေဖြင့် USPS အားဘီယာနှင့်ဝိုင်တင်ပို့ခြင်းကိုခွင့်ပြုခြင်းသည်သာမန်အသိဥာဏ်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများအားဤကြီးထွားနေသောလမ်းကြောင်းသစ်သို့ပို့သည်။ ဘီယာနှင့်ဝိုင်ကိုအခြားစာတိုက်များနှင့်ချောထုပ်များနှင့်မထည့်သွင်းရသည့်အကြောင်းပြချက်ကောင်းမရှိပါ။
Kasama ဟာရမ်အမျိုးအစားသို့အားလပ်ရက် Vibe ယူဆောင်လာသည်
2021-05-11 03:56:07 | ဝိညာဉ်များ...
Linkedin တွင် FacebookShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင် Share မှ Alexandra Dorda သည်ရမ်ကိုနှစ်သက်သော်လည်းရမ်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုမှသူမနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုမရှိသောကြောင့်သူမကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရမ်၏အမှတ်တံဆိပ်အများစုနှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိခဲ့ပါ။ "ကျွန်တော့်ကိုစကားပြောတဲ့စကားတွေကတော့မရှိခဲ့ဘူး" ဟုသူ...
Cuomo chips များဖြိုဖျက်ခြင်း - နယူးယောက်ပြည်နယ်သည်အရက်ဖြင့်အစားအစာလိုအပ်သောအုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်
2021-05-10 23:10:24 | ဝိညာဉ်များ...
Twitter ပေါ် Twitter တွင်မျှဝေပါ Linkedin နှင့်အတူ ShareShare နှင့်အတူနယူးယောက်မြို့၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၂၀ တွင် The Half Pint ၏ပြင်ပထမင်းစားခန်းတွင် mimosas များကိုသောက်သုံးသည်။ . . . [+] Alexi Rosenfeld / Getty Images ဓာတ်ပုံ။ Getty Images ဤနေရာသည် Cuomo ချစ်ပ်များဖြစ်သည်။ "Cuomo Chips များ" ကိုအသက်...
2021-05-10 22:52:55 | ဝိညာဉ်များ...
Linkedin Compass Box၊ Glasgow Blend Scotch ၏ဓာတ်ပုံ၊ Compass Box ၏ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်မှစ။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကမ္ဘာ့ ၀ ိညာဉ်ပြိုင်ပွဲ (SFWSC) သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အသက်အကြီးဆုံးနှင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်တရားသူကြီးများ၏အရည...
ဦး တည်ရာနေရာများ - ဒီကာရစ်ဘီယံဟိုတယ်သည် guests ည့်သည်များအတွက်အထူးစားသောက်ဖွယ်ရှိတဲ့ဘတ္ဘဲလ်ကိုပေးထားသည်
2021-05-10 16:55:06 | ဝိညာဉ်များ...
LinkedinRoséတွင် Facebook ရှိမျှဝေပါ TwitterShare တွင်နွေရာသီနှင့်အဓိပ္ပာယ်တူပါသည် (သို့သော်စစ်မှန်သောဝါသနာရှင်များကတစ်နှစ်ပတ်လုံးသောက်ရန်တိုက်တွန်းပါလိမ့်မည်။ ) ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် Le Barthélemyသည်ထိုရာသီအလိုက်ဝယ်လိုအားကိုအသစ်ထုတ်သောrosé butler ဖြင့်တုံ့ပြန်လိုက်သည်။ Biertélemy၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Marc ...
Pappy van winkle 2020 ကိုအနိုင်ရဖို့ထီတွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖမ်းမိတယ်
2021-05-10 00:31:36 | ဝိညာဉ်များ...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေပါ Linkedin တွင်မျှဝေပါ Pappy Van Winkle Bourbon သည်လူကြိုက်များပြီးပုလင်းများ။ Getty Images မှတစ်ဆင့် ၀ ါရှင်တန်ပို့စ် (Getty Images မှ ၀ ါရှင်တန်ပို့စ်မှ . . . [+] ၀ ါရှင်တန်ပို့စ်မှဓာတ်ပုံ။ ) အခက်အခဲအကျပ်အတည်းနှစ်အကြာတွင်၊ ပုန်းအောင်းခေတ်အလွန်အစတွင်ကင်ရန်...
San francisco ကမ္ဘာ့စိတ်ဓာတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုကနေကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဝိညာဉ်
2021-05-09 21:06:31 | ဝိညာဉ်များ...
Facebook တွင်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin Spirits သည်ပြပွဲဆုများတွင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဓာတ်ပုံ - ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကမ္ဘာ့ ၀ ိညာဉ်ပြိုင်ပွဲ၏ယဉ်ကျေးမှုအရှိဆုံးကမ္ဘာတွင်စိတ်ဓာတ်အရှိဆုံးသောဝိညာဉ်ပြိုင်ဆိုင်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာဆန်ဖရန်စစ္စကိုကမ္ဘာ့ ၀ ိညာဉ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သည်။ နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအန...
2021-05-08 19:37:47 | ဝိညာဉ်များ...
Linkedin တွင် FacebookShare တွင်မျှဝေပါ Sh ည့် taining ည့် for ည့်သည်များအတွက် one stop shop ။ သို့သော်သင်ဤအခမဲ့အချိန်ပြီးနောက်အနည်းငယ်သံချေးများသောခံစားနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကံကောင်းတာကပါတီတစ်ခုကနံပါတ်များသည်သင့်အားစုစည်းညီညွှတ်စွာအတူတကွပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်အနည်းဆုံးလူ ၈ ယောက်ကိုသင့်အိမ်တွင်အိမ်ရှ...
အမေအတွက်ဝီစကီများ - စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်များပါသည့်မိခင်များနေ့ကျင်းပခြင်း
2021-05-08 06:36:32 | ဝိညာဉ်များ...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ TwitterShare တွင်မျှဝေပါ Linkedin Writers's Tears တွင်အိုင်းရစ်ဝီစကီအတွက်အလွန်ကောင်းသောတီထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောမိခင်များနေ့လက်ဆောင်ပေးသည်။ နှင်းဆီနှင့်သကြားလုံးကိုမမေ့ပါနှင့်။ မင်းအမေတကယ်လိုချင်တာကဝီစကီပဲ။ ဝီစကီကောင်းတယ် ပျော်စရာဝီစကီ။ စိတ်ဝင်စားစရာဝီစကီ သင်၏...
နှင်းဆီပန်းကိုမေ့လိုက်ပါ၊ အမေနေ့အတွက်မေမေတကယ်လိုချင်တာက Rose ဖြစ်တယ်
2021-05-07 15:16:10 | ဝိညာဉ်များ...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Twitter တွင်မျှဝေပါ Linkedin သူငယ်ချင်းများနှင့် Erica Bluementhal နှင့် Nikki Huganir တို့သည် Yes Way Roséနှင့်အတူနေရာတိုင်းတွင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြသောကြက်မ္မ္မ္မ္ဌား။ မေမေတကယ်လိုချင်တာကပုလင်းတစ်ဒါဇင်ပါ။ ပန်းတွေနဲ့အတူဝိုင်တစ်ဒါဇင်ကျော်လောက်ပါးပြီးပန်းတွေမလိုအပ်ဘူး။ JSNQ သည်အချို့သော...
San francisco ကမ္ဘာ့စိတ်ဓာတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုအရအကောင်းဆုံးအိုင်းရစ်ဝီစကီ
2021-05-06 16:18:03 | ဝိညာဉ်များ...
Linkedin Midleton၊ အလွန်ရှားပါးသော Dair Ghaelach Knockrath Forest ဓာတ်ပုံ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် IDL ၏ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောဆန်ဖရန်စစ္စကိုကမ္ဘာ့စိတ်ဓာတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်။ ဤပြိုင်ပွဲသည်၎င်း၏တရားသူကြီးများ၏အရ...
အကောင်းဆုံး Cristalino tequilas နှင့်အတူ cinco de mayo ဆင်နွှဲ
2021-05-05 22:24:49 | ဝိညာဉ်များ...
Linkedin Herradura Ultra၊ Tequila AñejoPhoto, Herradura ၏ယဉ်ကျေးမှု။ ဤသည်မှာ ၁၉ ရာစုမထင်ရှားသောတိုက်ပွဲတွင် Cinco de Mayo ဖြစ်သည်။ ထိုရက်သည် Cinco de Mayo ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်မက္ကဆီကိုထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာလေ့လာတွေ့ရှိရသောနေ့ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်များသောအားဖြင့်သတိမပြုမိဘဲသွားပြီးလိမ္မာပါး...
Gordon & Macphail ကို ၆၇ နှစ်မြောက်စကော့တလန်ဝီစကီမှထုတ်လွှတ်ခဲ့သည်။ ဆာဂျော့ခ်ျ 1953 ၏ Glen Grant စက်ရုံမှအမွေ
2021-05-04 06:42:35 | ဝိညာဉ်များ...
Linkedin တွင် Facebook ပေါ်မျှဝေပါ။ Linkedin တွင်တင်ပါ။ Glen Grant စက်ရုံမှ Mr. George Legacy ၁၉၅၃ သည်အသက် ၆၇ နှစ်ရှိ Sherry cask ၏အလွန်ရှားပါးသောပုလင်းတစ်လုံးဖြစ်သည်။ [+] refined Glen Grant. Photo၊ ယင်း၏ရွက်ထဲမှာလေရှိပါတယ်။ ၀ ယ်လိုအားကတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာသည်။ စားသုံးသူစိတ်ဝင်စားမှုတိုးလာသည်။ ရှားပါး...
2021-05-03 19:16:45 | ဝိညာဉ်များ...
Linkedin ၏ Ute Londrigan သည် Westchester အခြေစိုက်စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံ၏ရုံးချုပ်အပြင်ဘက်တွင်ထိုင်သည်။ Londrigan သည်ဂျာမနီတွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီးသူမ၏အဖွား Maria Clancet သည်အိမ်တွင်းသစ်သီးဖျော်ရည်များထုတ်လုပ်ရာတွင်ကူညီသည်။ Londrigan ကပြောကြားသည်မှာ - သူမမိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများအတွက်သူမစတင်ခဲ့သည်။ "ကြှနျ...
2021-05-02 03:53:50 | ဝိညာဉ်များ...
Facebook ပေါ်မျှဝေပါ Linkedin တွင် TwitterShare တွင်မျှဝေပါမေလ ၁ ရက်နေ့တွင် EMPTY သည်အသင့်စားသောက်သုံးနေသောဗော့ဒ်ကာဆိုဒါအမှတ်တံဆိပ်သည်စားသုံးသူအသိအမြင်မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်နေပြီဖြစ်သည်။ REVIDELIZE လှုပ်ရှားမှုကို VIDE ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Sal Campisi နှင့် Ryan Laverty တို့က ဦး ဆောင်။ ပြီးခဲ့သ...
2021-05-02 02:57:53 | ဝိညာဉ်များ...
Facebook ရှိမျှဝေပါ Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေပါ Eka-Amity Hills ရှိ Grochau မြေအောက်ခန်းမှ Linkinin John Grochau AVA မြည်းစမ်းကြည့်ခြင်းနှင့်သူ၏အတွေးများကို . . . [+] အော်ရီဂွန်ဝိုင်ဘုတ်အဖွဲ့၏ဝိုင်ထုတ်လုပ်သူ Nate Wall of Troon စပျစ်ဥယျာဉ်မှ Vermentino မေ ၁ ရက်တွင်အော်ရီဂွန်နိုင်ငံ၏ဝိုင်ထုတ်လုပ်သူများသည်...